यस्ताे स्वभावकी युवतीः जसले एक नजरमै प्रेम गर्छिन्
पाेखरा १४ साउन– प्रेम सबैका लागि एकै किसिमको हुन्न । त्यसमा पनि प्रेम भाव कसरी, कहाँ, कुन अवस्थामा जाग्छ, त्यसको पनि पत्तो हुन्न । प्रेम प्रसंगको कुरा गर्ने हो भने केही युवतीहरु युवकको रुप देखेर नै प्रेम गर्न थाल्छन् । यो सबैमा लागू हुँदैमा किन भने कोही युवतीहरु भने सोच विचार गरेर मात्रै प्रेम सम्बन्धका लागि हात बढाउँछन् ।
प्रेमदेखि विवाहसम्म र भविष्य पनि सोचेर प्रेम गर्ने युवतीहरु आफैमा बौद्धिक हुन्छन् । यसमा पनि युवतीको नामको पहिलो अक्षरका आधारमा युवतीको स्वभाव कस्तो होला ? उनीहरुको प्रेम कति समयसम्म टिक्छ त ? नामको पहिलो अक्षरका आधारमा युवतीहरुको स्वभाव कस्तो होला ?
जानी राखौँ यि कुरा…
‘ए’ नामका युवती
पहिलो अक्षर ‘ए’ हुने युवतीहरुको स्वाभाव इमोशनल हुन्छ । यिनीहरु कुनै युवकको अनुहार हेरेर नै प्रेममा पर्छन् । यस्ता युवतीहरु छिट्टै पार्टनरलाई विश्वास गर्छन् । ‘एक्स्ट्रा केयरिङ’ प्रकृतिका यस अक्षरवाली युवती जीवनभरी पार्टनरको साथ छोड्दैनन् ।
‘जी’ नामका युवती
‘बी’ नामका युवती
यस अक्षरबाट नाम सुरु भएका युवती संवेदनशील हुन्छन् । र, छिट्टै प्रेममा पर्छन् । उनीहरु आफ्नो साथीको बानीको बारेमा सचेत हुन्छन् । आफूले आशा गरेजस्तो नभएमा साथी बिना रहन पनि स्वीकार गर्छन् ।
‘पी’ नामका युवती
‘एम’ नामका युवती
‘टी’ नामका युवती
यो अक्षरबाट नाम सुरु भएका युवती छिट्टै प्रेममा पर्छन् तर व्यक्त गर्नलाई हिच्किचाउँछन् । तर यिनीहरु आफ्नो प्रेम पाउनको लागि जे पनि गर्छन् । र जीन्दगीभर आफ्नो साथीको साथ छोड्दैनन् । यि प्रेमी जीवनभर एकअर्कालाइ सहयाेग गर्छन् ।